Mobiles kacha mma maka ihe na -erughị euro 300 - Septemba 2021 | Androidsis
Mobiles kachasị mma maka ihe na-erughị euro 300
Ọ bụrụ na ị na-achụ nta ma na-ejide ekwentị dị mma, dị mma ma dịkwa ọnụ ala, yana mmefu ego gị pere mpe mana ị ka nwere ike ị nweta ego karịrị mkpanaka rọba jupụtara na swiiti bọọlụ, mgbe ahụ ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị n'ihi na Taa na Androidsis anyị na-enye ị ndepụta na ụfọdụ n'ime ndị kasị mma smartphones nke oge, na nke kacha mma uru maka ego na, karia ihe nile, na ha echeghi otu ihe n'akpa efu.
Ndị anyị bụ ndị mejupụtara otu gam akporo Androidsis ji n’aka na enwere ekwentị maka onye ọ bụla. Ọ bụghị nke kachasị ọnụ, ọ bụghịkwa ya dị ọnụ ala. Ma ọ bụ ma eleghị anya ee, ka emechara, nke ahụ dị gị n'aka. Mana n'ọnọdụ ọ bụla, anyị chọrọ ka ị nwee ike ịhọrọ smartphone nke na-aza mkpa gị na atụmanya gị n'ụzọ kachasị mma yana na-enweghị nri na ọnwa a. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo ama iji megharịa brik ahụ ị na-ebu n'akpa gị mana mmefu ego gị pere mpe, lee ka ị na-aga igwe kachasị mma maka ihe na-erughị euro 300.
1 Nhọrọ pụrụ iche
2 Ihe nchegharị 5 kacha mma maka ihe na-erughị euro 300
2.2 Lenovo Zuk Z2
2.4 Na-asọpụrụ 6C
2.5 Huawei P9 Lite
3 Etu ị ga - esi mee ka ekwentị ọhụrụ gị pere mpe karịa euro 300
4 Characteristicskpụrụ njirimara nke ekwentị nke erughị 300 ga-enwerịrị
Nhọrọ pụrụ iche
Taa ka anyị wetara gị a nhọrọ nke kacha mma mobiles nke na-erughị 300 euro, na ọ bụ nhọrọ pụrụ iche maka ọtụtụ ihe.
Nke mbụ, anyị na-eche ihu akara nke ngwaọrụ ndị a maara dị ka ufọt ufọt, ọ bụ ezie na e nwere ndị na-arụtụ aka na ha dị obere (nnukwu ndudue) ma ọ bụ dị elu, ma ọ bụ n'etiti obere nso ... Ma nke bụ eziokwu bụ na maka ọtụtụ oke elu na-amalite na narị euro anọ na n'elu ya a ka nwere onye ọzọ, nke kachasị elu.
Na nkenke, ezigbo ọgbaghara n'ihi na nke bụ eziokwu bụ na teknụzụ na - agbanwe ngwa ngwa nke ukwuu na eziokwu bụ na n'ime narị igwe euro atọ anyị nwere ike ịchọta igwefoto nwere otu njirimara dịka nke ejikọtara na igwe euro narị ise, iji setịpụ ihe atụ. Echere m na nke a na akara ahụ dị ọkụ ugbu a na nke ahụ Ọnụahịa n'onwe ya abụghị nke dị elu ma ọ bụ nke dị ala n'ọnọdụ niile, ịbụ uru maka ego na mmezu nke anyị chọrọ mkpa dị ukwuu nke anyị ga-eburu n'uche mgbe niile. mgbe ị na-ahọrọ ekwentị mkpanaaka ọhụrụ.
N'aka nke ọzọ, ndị na - arụ ọrụ n'etiti ekwentị nwere ike bụrụ ndị kacha kpachara anya na ọ dị, na nke a bụ ekele onwe onye, ​​nke ahụ bụ, ebe ha nwere oke ego ma họrọ ịghara imefu otu nde, ma Ha chọrọ ekwentị ọ bụla , ha achọghịkwa ka e mee ka ọ dị ọhụrụ ugboro abụọ ọ bụla atọ. Ọ bụ ya mere ha ji etinye uche pụrụ iche na akụkụ abụọ dị mkpa: njirimara na uru nke ekwentị gị kwesịrị inwe, yana otu esi echekwa ekwentị gị ka ọ dịrị ka ụbọchị mbụ maka ogologo.
Ihe nchegharị 5 kacha mma maka ihe na-erughị euro 300
Ma ugbu a na anyị maara ihe anyị kwesịrị ileba anya na otu esi echedo ama anyị, ka anyị hụ igwe kachasị mma maka ihe na-erughị euro 300. Buru n'uche na na nhọrọ anyị, anyị gbalịrị na ị nwere ike nweta ha na Spain ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ya afọ abụọ akwụkwọ ikike nke iwu Europe guzobere. N'aka nke ọzọ, ọnụahịa na-agbanwekarị nke ukwuu, yabụ, ọ bụrụ na ịchọta otu n'ime ụdị ndị a dị oke ọnụ, atụla ụjọ, ikekwe n'ime ụbọchị ole na ole ọ ga-akụda ọdịda ọzọ. Anyi ka anyi bido?
Meizu abụghị ika ama ama dịka Xiaomi, Samsung ma ọ bụ Huawei, agbanyeghị ọ na-emekwa niche dị mkpa na ahịa ọdịda anyanwụ maka smartphones nwere ụdị dị ka nke a. Meizu MX6, a nnukwu, smartphone dị ike ma dị elu nke ahụ agaghị ahapụ gị enweghị mmasị.
Ọ nwere ihuenyo nke 5,5 nke anụ ọhịa ahụ Full HD 1920 x 1080 (ezigbo maka ilele usoro Netflix gị, vidiyo YouTube na ndị ọzọ), 20 GHz deca-core MediaTek Helio X3.6 processor, 4 GB nke RAM nchekwa na 32 GB nke nchekwa n'ime. Na mgbakwunye, ị ga-enwe ọtụtụ ihe 3.060 mAh batrị iji kporie gam akporo 6 Marshmallow na igwefoto ya megapixel iri abuo na ubochi. Na ihe a niile maka ụgwọ si 268 euro.
O doro m anya na akara Zuk "dị ka nke China" nye gị, agbanyeghị ọ bụrụ na m gwa gị na ọ bụ akara nwere akara Lenovo, ihe gbanwere. N'ezie, Zuk Z2 a bịara na mma Lenovo ma ọ bụ ama ezigbo maka ndị chọrọ nnukwu ihuenyo, mana "na-agaghị agafe.
El Lenovo Zuk Z2 na-enye anyị a 5 anụ ọhịa ahụ IPS na 1080 x 1920 p mkpebi nke na-abịa na A gam akporo 6.0 Marshmallow. N'ime, a na-enye ike na arụmọrụ niile site na Snapdragon 820 processor Qualcomm quad-isi 2,15 GHz tinyere ihe osise Adreno 530, 4 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa esịtidem bụghị expandable.
Na ngalaba vidiyo na foto, a Igwefoto buru ibu 13 megapixel ya na Samsung Isocell sensor na ihu 8 megapixel.
Isi atụmatụ nke smartphone a na-agwụ agwụ site na a 3.500 mAh batrị, barometer, compass, ihe mmetụta ọkụ ambient, accelerometer, ihe mmetụta ihe dị nso, ihe mkpịsị aka mkpịsị aka, 4G LTE Njikọta, Dual SIM, Bluetooth 4.4, GPS, 3.5mm jackphone na ọtụtụ ndị ọzọ. O doro anya na anyị na-eche ihu otu nke kasị mma mobiles ihe na-erughị 300 euro.
Anyị na-aga n'ihu nhọta anyị nke mobiles kacha mma maka ihe na-erughị euro 300 na nke a BQ Aquaris X, smartphone site na ụlọ ọrụ Spanish a nke na-abịakwute anyị 5,2 nke anụ ọhịa ahụ Full HD ihuenyo na 2.5D cruvo kristal na sistemụ arụmọrụ Android Nougat na a ga-akwatu site n'ime site a Octa-isi Snapdragon 625 processor 2,2 GHz Qualcomm esonyere 3 GB nke RAM na a 32GB n'ime nchekwa na anyị ga-enwe ike ịgbasa site na iji kaadi microSD nke ruru 256 GB. Ihe a niile yana a 3.100 mAh batrị na Ndenye Nchaji 3.0 usoro, a Igwefoto buru ibu 16 megapixel na ihu 5 Megapixels. Pricegwọ ya? Gburugburu 280 euro.
Anyị enweghị ike ichefu banyere ihe a magburu onwe ya Na-asọpụrụ 6C na anyị nwere ike inweta maka naanị 207 euro na-abịa na a na ihuenyo nke 5 sentimita, Qualcomm asatọ isi ihe nhazi MSM8940 esonyere 3 GB nke Ram na 32 GB nke nchekwa esịtidem gam akporo 6.0 Marshmallow n'okpuru EMUI 5.1 nhazi akwa, 3.020 mAh batrị, Igwefoto isi megapixel 13 na kamera 5 MP n’ihu, microSD na ndị ọzọ.
Naanị euro 209 ị nwere ike ịnweta ọmarịcha Huawei P9 Lite Ngwongwo ígwè, otu n'ime mobiles kachasị mma maka ihe na-erughị euro 300 nke ga-enye gị nnukwu 5,2 anụ ọhịa ahụ na mkpebi HD zuru ezu, sistemụ arụmọrụ Android 6.0 Marshmallow, isi ihe nhazi asatọ, 2GB Ram, 16GB nchekwa Esịtidem expandable via microSD kaadị, mkpisiaka ihe mmetụta, 13 MP isi igwefoto, f / 2.0 na akpaka na-elekwasị anya, Ikanam flash, 3.000 mAh batrị Nke ị nwere ike iji nọrọ ụbọchị dum na ọtụtụ ihe.
Na ihe nlereanya a, anyị kwụsịrị nhọta anyị nke igwe eji mma kacha mma maka ihe na-erughị euro 300. N'ụzọ doro anya, ọ bụghị naanị ha ebe ọ bụ na onyinye a dị na ọnụahịa a sara mbara ma dị nnọọ iche; Anyị nwekwara ike ịkọwa Nubia N1, ZTE Axon 7 Mini, ZTE Blade V8, Nubia M2 Lite, na Nokia 6 na n'ezie Xiaomi Mi 5S ka osila dị, a ga-ahọrọ nhọrọ, ọ ga-ahọrọ ndị nwere ike ịbụ nke kacha mma, ọ bụghị ha niile, yabụ anyị ga-abawanye ma melite, ya mere nọrọ na nche ma echefula ya.
Etu ị ga - esi mee ka ekwentị ọhụrụ gị pere mpe karịa euro 300
N'agbanyeghi ogo nke nchebe megide mmiri na uzuzu nke ekwentị anyị na-enye, na ọbụlagodi ihe eji eme ya (isi, metal, aluminom na / ma ọ bụ iko), ekwentị mkpanaaka anyị na-emebi emebi, ọ nweghị ihe ọghọm na oge ọ bụla anyị nwere ike ịbụ enweghị ya. Iji zere nke a, anyị ga-ewere ụfọdụ jikoro:
Jiri mkpuchi mkpuchi dị mma, nke na-echebe akụkụ na akụkụ nke ngwaọrụ ahụ, ọkacha mma na ihe ndị dị ka silicone, roba, TPU ebe ọ bụ na ha na-adịgide adịgide, ihe na-eguzogide ọgwụ nke na-emetụta mmetụta dị mma. Ma ọ bụrụ na ị na-anọkarị na "mie ala ọnọdụ", họrọ maka a zuru mkpuchi. Ọ bụ obere ego ị ga-eji chekwaa nnukwu ego.
Nchekwa ihuenyo mgbe niile, na ugegbe enyo. Ọ dị mkpa n'ezie ịkọwa ihe kpatara ya?
Gbaa na gburugburu onodu di egwu dị ka ime ụlọ ịwụ, kichin na ihe ndị yiri ya. Ma ọ bụrụ na ị gaa n'ụsọ osimiri ma ọ bụ ọdọ mmiri, ahapụla ya na anyanwụ ma jiri mkpuchi na-enweghị mmiri (ọbụlagodi "zip" maka nri nri bụ ezigbo azịza n'ọnọdụ ndị a).
Characteristicskpụrụ njirimara nke ekwentị nke erughị 300 ga-enwerịrị
Ozugbo anyị kpebiri ihe mmefu ego anyị bụ, anyị ekwesịghị ịduzi akụkụ ndị na-adịghị mkpa dịka akara ahụ, kama site na njirimara ụfọdụ dị mkpa na ojiji anyị ga-enye ya. Yabụ, mgbe ị na-ahọrọ smartphone ọhụụ, anyị ga-etinye uche pụrụ iche n'akụkụ ndị a:
Ihuenyo: nha na mma. Ọ bụrụ na anyị elele ọtụtụ ọdịnaya dị na mgbasa ozi ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị enwee nsogbu ọhụụ, anyị ga-achọ ihu ngebichi buru ibu yana mkpebi dị elu, ma ọ bụghị ya, anyị nwere ike ịhọrọ ekwentị dabara n'ọbụ aka anyị.
Ike na arụmọrụ. Maka iji "nkịtị" (ịntanetị, netwọkụ mmekọrịta, ozi ịntanetị ma ọ bụ ụfọdụ egwuregwu ndị bụ isi) ihe ọ bụla ụdị karịa 1 GB nke RAM ma nwee ezigbo nhazi ga-ezu. Mana ọ bụrụ na anyị ga-egwu egwuregwu dị egwu na eserese dị egwu, mgbe ahụ anyị ga-achọ ike karịa.
Igwefoto. N'oge a, anyị niile na-ebu ọtụtụ foto na vidiyo na, ọ bụ ezie na anyị abụghị ndị ọkachamara, ha bụ ncheta ndị anyị nwere mmasị ịchekwa yana oke mma. Maka nke a, ị kwesịrị ị paya ntị pụrụ iche, karịa ihe niile, na igwefoto bụ isi, nke nwere ike ịnye onyonyo dị elu, mana kpachara anya, n'ihi na ọ bụghị ihe niile bụ megapixels.
Nchekwa. Dị njikere ị nwere nchekwa zuru oke maka ngwa ma ọ bụ ekwentị mkpanaka gị ga-amalite nwayọ. Ihe ndị ọzọ (egwu, vidiyo, foto ...) ị nwere ike ịchekwa na kaadị nchekwa dị na mpụga ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Batrị. Isi ihe bụ na ọ bụrụ na ị nọrọ ọtụtụ oge pụọ n'ụlọ, gbaa mbọ hụ na ekwentị mkpanaaka gị nwere batrị zuru ezu ka ị ghara ịchọ plọg ebe niile ma ọ bụ jiri ụgwọ na banki.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles kachasị mma maka ihe na-erughị euro 300
Biko oge ọ bụla ị kwadoro ekwentị ndị China, ihe kachasị mkpa bụ ikwu ma ọ bụrụ n'asụsụ Spanish ma weta Storelọ Ahịa Play….
Ga-achọpụta na ndị na-eso ụzọ gị bụ ndị Spen na nke ahụ bụ ihe kachasị mkpa, yana nkwanye ùgwù niile, ekele na ekele n'ọdịnihu
Ndewo Luriber. Anyị ahọtabeghị ekwentị China ọ bụla, ha niile maara nke ọma ma rere na Spain. A na-ere ha niile na Amazon na Spain ma yabụ ga-etinye sistemụ arụmọrụ na Spanish. Ma ọ bụghị ya, nke na-ekwesịghị ime n'ihi ihe doro anya, ị nwere ike weghachite ya mgbe niile n'efu. Banyere otu n'ime smartphones ndị a chọrọ, BQ Aquaris X, ọ na-aga n'ekwughị na BQ bụ ụlọ ọrụ Spanish. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ ezigbo nchọpụta na anyị kwesịrị iburu n'uche mgbe niile dị ka ndị ọrụ. Echiche kacha mma!!!
Zaghachi Jose Alfocea
Motorola weputara Moto 360 Camera modul maka ngwaọrụ Moto Z
Netflix nwere ike ibuli ọnụahịa nke atụmatụ ya niile ugbu a